QODOBADA HESHIISKA AY QALINKA KU DUUGEEN XISBIYADA IYO KOMISHANKU | Toggaherer's Weblog
Saddexda xisbi Iyo Commission ka Doorashooyinka Qaranka ee maanta kala saxeexday heshiis Hawlgelinta ServeRKA
Heshiiskaasi wuxuu u qoran yahay sidan:
“ Qaraarka hoos ku xusan waxa loo adeegsanayaa sidii loo soo saari lahaa liiska kama damabaysta ah ee codbixiyeyaasha iyo weliba tiradii iska diiwaan gelisay goob walba.
1- Guddida farsamo ee diiwaan gelinta ayaa isku duba ridi doona liiska codbixiyeyaasha iyaga ayaana qiimayn doona liiska sida ku cad qodobka 36-aad. Dhammaan tallooyinka ka soo baxa guddida farsamada ee diiwaan gelinta ee ka tujumaya hawshooda diiwaan gelinta waa inay ahaadaan kuwo la isku wada raacsan yahay waana in loo gudbiyaa tallooyinka komishinka si ay uga baaraan degaan.
Komishinka doorashooyinka waxa xil ka saaran yahay inuu darso tix geliyana tallooyinka ay soo jeediyaan guddida farsamo ee diiwaan gelintu, inta aan la daabicin liiska kama damaysta ah.
2- Server-ka diiwaan gelinta ee ay ku kaydsan yihiin xogaha dadka is diiwaan geliyay iyo agabka Soft ware-ka ee loogu tallo galay inuu akhriyo xogaha waa inay ahaadaan kuwo loo ogol yahay dad aad u yar, inay faro geliyaan amabase ay galaan qolka agabkaasi yaalo.
3- Habka lagu baadho faraha ee loo yaqaano (AFIS) ayaa loo adeegsan doonaa sidii meesha looga saari lahaa dadka mar wax ka badan is diiwaan geliyay ee faraha laga qaaday.
4- Waxa kale oo la iticmaalyaa hab aqoonsan kara wajiga qofka si mar kale loo hubiyo cida mar wax ka badan is diiwaan gelisay.
5- Farsamoyaqaanada qaabilsan Server-ka ayaa waxay isticmaali doonaan Software aqoonsan kara [Kala saari kar] xogta laga soo ururiyay goobaha, waxaanay farsamoyaqanadaasi ay soo diyaarin doonaan shuruudo lagu kala saari doono si ay u qeexaan cidda la aqbali doono iyo cidda aan la aqbali doonin ee la diidi doono.
Kooxda farsamo yaqaanadu waxay si wada jir ah u soo diyaarin doonaan shuruudaha lagu kala saarayo dadka is diiwaan geliyay, waxayna shuruudahaasi u soo u gudbin doonaan Komishinka, si ay u ansixiyaan shuruudahaasi waa inay waafaqsan yihiin shuruucda xeerka diiwaan gelinta codbixiyeyaasha iyo lifaaqiisii.
6- Shuruudaha uu komishinku ansixiyay ee lagu kala saarayo dadka ayaa lagu dabaqin doonaa xogta isdiiwaan geliyeyaasha si loo qeexo cidii loo aqoonsansanayo inay si sax ah isku diiwaan gelisay iyo cidii laga saarayo liiska diiwaan gelinta iyo sababaha loo diidayba [iyadoo loo cuskanayo shuruudihii lagu heshiiyay ] in dadka lagu kala saaro].
7- Guddida farsamadu waa inay si wada jir ah u ansixiyaan liiska kama dambaysta ah waana inay liiskaas u gudbiyaan Komishinka doorashooyinka kuna talin doona cidda loo daabaco liiska .
8- Dadka aan gaadhin da’ada codbixinta waa in laga waaniyaa in aanay coddayn, iyadoo loo adeegsanayo olale wacyi gelineed oo ku aadan dadkaa iyaga ah. Arrintan khusaysa da’yarta waa inaanay noqon mid la soo bandhigayo maalinta doorashadu dhacayso oo kaliya ee waa in loo sii sheegaa dadka da’da yar inaanay marna coddayn karin inta ka horraysa doorashada.
9- Iyadoo laga duulaayo dadka faraha badan ee ku noqnoqday is diiwaan gelinta ayaa waxa lagama maarmaan ah in komishinku uu ka qaado talaabo sharciga waafaqsan dadka ku noqnoqday diiwaangelinta, sida ku cad xeerka diiwaan gelinta qodobkiisa 33-aad kaasi oo dhigaya inay mamnuuc tahay in hal kaadh wax ka badan qof qaato, komishinku waa inuu ku dhaqaaqaa wacyi gelin balaadhan, si loo fahamsiiyo dadka ciqaabta la gudboon qaadashada hal kaadh wax ka badan.